Izizathu eziyi-8 zokuthi itiye le-lemongrass Lihle Kakhulu Empilweni Yakho - Ezempilo
Izizathu eziyi-8 zokuthi itiye le-lemongrass Lihle Kakhulu Empilweni Yakho
Amalamoni abalulekile ekhishini laseNdiya, ngoba lokho kunanoma yiliphi ikhishi. Yengeze enkomishini yetiye futhi usethwe ngenqwaba yezinzuzo. Ngaphezu kukavithamini C abadume ngawo, ulamula ugcwele namaminerali abalulekile njenge-calcium ne-magnesium, engazuzisa zonke izici zezempilo. Itiye le-lemongrass liyindlela elula yokufaka amabhunu alesi sithelo osukwini lwakho nsuku zonke.
Le ndlela enoshukela ophansi, ikhalori ephansi yokwengeza uhla lwamavithamini namaminerali ekudleni kwakho. Nazi izizathu eziyi-8 zokuthi kungani kufanele uqale ukuphuza itiye lemongrass namuhla:
1. Ikhipha Ubuthi Emzimbeni
ezimbili. Kuqinisa Impilo Yokugaya
3. Igcina I-Hydrated One
Isine. Usekela Uhlelo Lokuzivikela Emzimbeni
5. Kuthuthukisa Impilo Yesikhumba
6. Kuthuthukisa i-Mood
7. Izinsiza Zempilo Ye-Urinary Tract
8. Izinzuzo Zetiye Le-lemongrass Esikhathini Eside
9. Itiye Lemon: Ama-FAQ
Ikhipha Ubuthi Emzimbeni
Okuqukethwe kwe-citric acid kulamula kuphakeme ngokumangazayo, kusiza ekuhlanzeni isibindi. Ukuphuza itiye lemongrass esiswini esingenalutho ekuseni kusiza ekuqedeni yonke imfucumfucu nobuthi obutholwe esibindini ngaleyo ndlela kukhipha umzimba emzimbeni emzimbeni ngokuphelele. Amalamula aqukethe nama-citrus flavonoids. Lawa ma-antioxidants alwela ukuvikela umzimba kubuthi bemihla ngemihla nezingcindezi futhi alwa nama-radicals amahhala, angancoma kakhulu impilo ngokuhamba kwesikhathi.
ICEBISO: Kukhona into efana nokuningi kakhulu. Njengoba itiye line-asidi emvelweni, kungcono ukukhawulela kungabi ngaphezu kwezinkomishi ezintathu ngosuku, kuncane noma ngabe ujwayelene ne-acid reflux.
Kuqinisa Impilo Yokugaya
Imicu yokudla ekhona etiyeni lemongrass inciphisa ukucubungula ushukela olula, ukuthuthukisa impilo yamathumbu nokulawula imetabolism kanye nesifiso sokudla. Lokhu kukhulisa kakhulu impilo yokugaya ukudla kunciphisa ukungakhululeki kokugaya ukudla uma kukhona futhi kungahle kube wusizo uma uzama ukunciphisa isisindo noma ukugcina isisindo somzimba esinempilo. Njengoba usususile ubuthi futhi ukwazi ukushisa amakhalori ngokushesha ngenxa yemetabolism esheshayo, umzimba uyakwazi ukukhipha amafutha ngokushesha. Itiye le-lemongrass laziwa nangokuthi lenyusa ukumelana ne-insulin, okuphetha ngokugaya okungcono nokugcina amafutha ephansi.
ICEBISO: Ukubeka inkomishi yetiye le-lemongrass ngemuva kwesidlo esinzima noma lapho uhlangabezana nokungakhululeki kokugaya ukudla kuthuthukisa kakhulu ukugaya.
Igcina I-Hydrated One
Umuntu ojwayelekile kufanele aphuze cishe amalitha amabili amanzi ngosuku, kepha nangaphezulu, kufanele kube khona ukutholakala komzimba emzimbeni ukuze kutholakale kweminye imithombo njengokudla , iziphuzo, njll. Uma ungumuntu okuthola kunzima kakhulu ukugcina umkhondo wamanzi owasebenzisayo, indlela enhle kakhulu ukufaka imithombo ye-hydration, itiye kalamula libe linye, enkambisweni yakho yansuku zonke. Lokhu kungakusiza kakhulu ukukugcina unamanzi nsuku zonke.
Ithiphu: Uma i-hydration ikhathaza kakhulu, cabanga ukukhulisa okuqukethwe kwetiye ngenkathi ugcina ezinye izithako zihlala zikhona.
Usekela Uhlelo Lokuzivikela Emzimbeni
Inkomishi eyodwa yetiye inganikeza umzimba cishe uhhafu wenani lansuku zonke elinconyiwe likavithamini C. Lokhu kungaqinisa futhi kusekele amasosha omzimba kakhulu, awanikeze ngosizo aludingayo lokulwa nezifo ezithathelwanayo ngempumelelo. Noma umzimba ubhekene nemiphumela yokutheleleka, ama-antioxidants akhiphe ulamula angakusiza kahle ukuxinana esifubeni futhi, okusiza ekululameni okusheshayo ezigulini ezithathelwanayo, ikakhulukazi kuma-monsoon.
ICEBISO: Faka uju etiyeni lakho ukuthambisa umphimbo obuhlungu, phlegm neminye imiphumela enjalo yokushintsha kwesimo sezulu.
Kuthuthukisa Impilo Yesikhumba
Ngezici zayo zokuphamba, itiye likalamula, ngokuhamba kwesikhathi, ukuthuthukisa impilo yesikhumba ngokususa amangqamuzana esikhumba afile nokuvuselela isikhumba. Kungasiza futhi ngenduna kanye ne-eczema. Ukudla okuvamile kwe-vitamin C nama-antioxidants, ngaphezu kwe-hydration ethuthukisiwe, kungenza ubuso bukhanye, bubukeke bunempilo.
Ngokuhamba kwesikhathi, ukuhlanganiswa kwe-collagen kungathuthukisa futhi kwenze kube sobala ezinye izimpawu zempilo engcono yesikhumba njengokuguga kancane kanye nokubuyiselwa emuva okucashile kwizimpawu zaso ngendlela yokuthungwa kwesikhumba okucwengile kakhudlwana, isikhumba esiqinile, njll. Ezinye izifundo zize ziphakamise ukuthi lokhu izakhiwo zingakhuthaza ukwelashwa okusheshayo.
ICEBISO: Ungalindeli ukuthi kube nezinguquko ezinqala ezizovela ngenxa yetiye kalamula.
Icebile ngomsoco, itiye le-lemongrass lisula umzimba wetyhefu ingcindezi engayakha futhi ivule indlela yempilo engcono yobuchopho. Umuntu angathola imizwa ethuthukisiwe. Ingalapha ukuphathwa yikhanda, ikhulise amandla ngokugcina ukukhathala nokukhathala, ikhuphule umthamo jikelele wokusebenza kobuchopho nsuku zonke kanye nempilo yayo yesikhathi eside futhi iqede nezimpawu zokucindezeleka nezinkathazo. Kungaba kuhle ukucaciseleka kwengqondo futhi kungathuthukisa inkumbulo. Iphunga lingaba nemiphumela esheshayo nemimoya ekhuthazayo.
ICEBISO: Sebenzisa lo bhiya ekuseni ukuze uzizwe uvuselelwe futhi uqabulekile usuku lonke.
Izinsiza Zempilo Ye-Urinary Tract
Ngokuqukethwe kwayo kwe-citric acid, itiye lemongrass iyi-diuretic yemvelo enganciphisa ukugcinwa kwamanzi futhi ngokususwa kobuthi, ingakhuthaza impilo yomgudu womchamo. Amalamula alungisa futhi agcina amazinga e-pH asemgudwini wokuchama, evimbela amagciwane ayingozi ukuba angakhuli. Itiye lelamula lingagwema nokutheleleka ngomgudu womchamo. Amalamula aqukethe i-citrate, engavimbela i-calcium ekwakheni nokwakha amatshe ezinso zakho.
ICEBISO: IVitamin C ilahlekelwa amandla ayo lapho ivezwa emoyeni, ngakho-ke kungcono ukusebenzisa ulamula omusha noma inzuzo ephezulu.
Izinzuzo Zetiye Le-lemongrass Esikhathini Eside
Itiye kalamula ligcwele izakhamzimba ezingakhuthaza impilo ende. Ngokuhamba kwesikhathi, ingahlinzeka ngezinzuzo eziningi ezinjengempilo yenhliziyo engcono nengozi encishisiwe yezifo zenhliziyo, ushukela wegazi olawulwayo, amathuba aphansi amatshe ezinso. Ukuba nemiphumela yokulwa nokuvuvukala nakho kunganciphisa ubungozi besifo sobuchopho nezinye izifo eziwohlozayo. Ngama-flavonoid ayo, inganciphisa amathuba omdlavuza. Ihlola ukukhula kwamangqamuzana omdlavuza futhi ingasebenza ngokuqhathaniswa nezinhlobo ezithile zayo. Itiye lelamula nalo lingasebenza ngempumelelo ekulweni nezifo, i-allergic reaction migraines ngisho nezinsini ezivuthayo.
ICEBISO: Ngokugcoba uketshezi lukalamula etiyeni lakho ungasebenzisa ama-antioxidants atholakala kuma-peels wezithelo anciphisa ubungozi bakho bomdlavuza, isifo sikashukela, i-osteoarthritis nezinye izifo ezingalapheki.
Itiye Lemon: Ama-FAQ
U. Lenziwa kanjani itiye kalamula?
TO. Kunezindlela eziningi umuntu angazilandela, sikulethela elula engadingi noma yimaphi amagajethi.
Bilisa inkomishi yamanzi, uma usuqedile cisha ilangabi.
Faka uhhafu wethisipuni wesigamu noma wekota wamakhasi akho ejwayelekile wetiyi. Itiye eliluhlaza ingasetshenziswa futhi.
Vala i-pan bese uyivumela ukuthi yenze cishe imizuzu emibili.
Cindezela ujusi kalamula etiyeni. Abanye baze bakhethe ukuphuza itiye ngezingcezu zikalamula.
Faka uju noma ushukela ukunambitha.
Ungadlala uzungeze ngale ndlela, ungeze izithako ezinjenge-ginger, i-mint, i-lemongrass noma isinamoni ngokuya ngokuthanda nezinjongo zezempilo.
U. Yiziphi izinyathelo umuntu okufanele azithathe ngenkathi ephuza itiye likalamula?
TO. Njengoba kushiwo ngaphambili, itiye likalamula liphakeme kokuqukethwe kwalo i-asidi futhi lingakhuphula i-acid reflux. Ukusetshenziswa isikhathi eside kuye kwaxhunyaniswa nokuguguleka koqweqwe lwamazinyo nezilonda zesisu. Akuphephile ukuthi abesifazane abakhulelwe bangadla, ngenxa yokuqukethwe kwe-caffeine. Akuwona umqondo omuhle kulabo abane-high blood pressure noma isifo sohudo.
ukuvimbela kanjani ukulahleka kwezinwele ngokwemvelo ekhaya
ungayifaka kanjani i-baking soda ebusweni
ungamisa kanjani izinwele eziwayo
amathiphu asekhaya wobuso besikhumba esikhanyayo
ukuzivocavoca okuhle ukushisa amafutha esiswini